विजेट यूट्यूब भिडियो डाउनलोडर - सबै भन्दा राम्रो अनलाइन youtube भिडियो डाउनलोडर
विजेट यूट्यूब डाउनलोडर
एक यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न आफ्नो यूट्यूब भिडियो पृष्ठ ठेगाना टाँस्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्
कसरी यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्ने?
यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न तपाईले तलका चरणहरू गर्नुपर्दछ।
पृष्ठ ठेगाना प्रतिलिपि गर्नुहोस्
तपाइँ डाउनलोड गर्न चाहानु भएको युट्यूबबाट तपाइँको युट्युब भिडियो पृष्ठ युआरएल प्रतिलिपि गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको ब्राउजरको ठेगाना पट्टीमा Ctrl + C प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ वा प्रस menu्ग मेनूबाट प्रतिलिपि गर्नुहोस्।
ठेगाना क्षेत्रमा पेस्ट गर्नुहोस्
यस पृष्ठको शीर्षमा ठेगाना क्षेत्रमा प्रतिलिपि गरिएको लिंक टाँस्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं Ctrl + C को साथ url टाँस्न वा फाँटमा समात्नुहोस् र टाँस्नुहोस् विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाईं डाउनलोडको लागि भिडियो फाइलको सूची प्राप्त गर्नुहुनेछ। सूचीमा केहि भिडियो गुणहरू छन्। तपाईंको कस्टम गुणको डाउनलोड लिंकमा क्लिक गरेर त्यसपछि डाउनलोड प्रोसेस सुरु हुनेछ।
यूट्यूब पृष्ठमा तपाईको ब्राउजरको ठेगानामा क्लिक गर्नुहोस् र "युट्युब" शव्द पछि " यूयू " थप गर्नुहोस् त्यसपछि इन्टर / गो क्लिक गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी यदि पृष्ठ ठेगाना https://www.youtube.com/watch?v=aefHHOUM_ds https://www.youtube UU .com / वाच? v = aefHHOUM_ds मा परिवर्तन गर्नुहोस्
विजेट यूट्यूब डाउनलोडरले तपाईंलाई सजीलै यूट्यूब भिडियो र यूट्यूब संगीत डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। जस्तो कि तपाइँलाई थाहा छ युट्यूबले प्रयोगकर्ताहरूलाई भिडियोहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिँदैन प्रतिलिपि अधिकार जस्ता केही कारणहरूको कारण। हामीले यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्न एक उत्तम उपकरण बनायौं। यूट्यूब भिडियो डाउनलोड गर्नका लागि तपाईंले भर्खर भिडियो ठेगाना प्रविष्ट गर्नुभयो।
विजेट पनि यूट्यूब प्लेलिस्ट डाउनलोड समर्थन गर्दछ। तपाईं आफ्नो प्लेलिस्ट ठेगाना प्रविष्ट गर्न र भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
उपशीर्षकहरू उपस्थित हुन्छन् जब भिडियो उपशीर्षकहरू छन्। तपाईं आफ्नो कस्टम उपशीर्षक छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्।
किन भिडियो रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ? YouTube ले "भिडियो मात्र" ढाँचामा उच्च गुणवत्ता भिडियो प्रस्तुत गर्दछ। यसको मतलब भिडियोमा कुनै आवाज छैन। हामी दुबै अडियो र भिडियो डाउनलोड गर्छौं र अडियो भिडियोमा संलग्न गर्दछौं। यो सुविधा द्वारा तपाईं उच्च गुणवत्ता ढाँचाहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुन्छ।
vidiget youtube downloader सुविधाहरू
vidiget आफ्नो भिडियो सहितको फाइलहरु। 4k, hd, पूर्ण HD भिडियोहरू समावेश गर्दछ
छिटो डाउनलोड र रूपान्तरण
भिडियो फाइलहरू तयार हुनेछ र केही बेरमा परिवर्तन हुनेछ
डाउनलोड youtube संगीत संगीत
भिडियोको सबै उपशीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस्
भिडियोको सबै अडियो फाईलहरू MP3, aac, opus
जस्ता सामान्य ढाँचामा।
डाउनलोड गर्नुहोस् एक यूट्यूब प्लेलिस्ट
हाम्रो डाउनलोड उपकरणहरू
सामाजिक मिडिया नेटवर्कबाट सजिलो डाउनलोड